ကမ္ဘာ​ပေါ်က စစ်​တပ်​မရှိဘဲ အုပ်​ချုပ်​​သောနိုင်​ငံ​ပေါင်း ၂၂ နိုင်​ငံ | Danya Wadi
Browsing: » Home »သတင်းများ»ကမ္ဘာ​ပေါ်က စစ်​တပ်​မရှိဘဲ အုပ်​ချုပ်​​သောနိုင်​ငံ​ပေါင်း ၂၂ နိုင်​ငံ	Leaveacomment
ကမ္ဘာ​ပေါ်က စစ်​တပ်​မရှိဘဲ အုပ်​ချုပ်​​သောနိုင်​ငံ​ပေါင်း ၂၂ နိုင်​ငံ	Posted by danyawadi on August 7, 2016 in သတင်းများ	ကမ္ဘာပေါ်က စစ်တပ်မရှိသော နိုင်ငံ ၂၂ နိုင်ငံ
သြဂုတ် ၇၊ ၂၀၁၆
– ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ စစ်တပ်ဆိုတာ မရှိမဖြစ်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အင်အားကို တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ စစ်တပ်အင်အားနဲ့ တိုင်းတာလေ့ ရှိကြပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းကလည်း ခေတ်မီအဆန်းပြားဆုံး လက်နက်တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင် သူ့ထက်ငါ အလုအယက် ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။
ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့စစ်တပ်တွေဖြစ်ဖို့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း သန်းချီ အသုံးပြုဖို့လည်း သူတို့တွေက ၀န်မလေးကြပါဘူး။ အဲဒီလို နိုင်ငံတော်တော်များများက လက်နက်အားပြိုင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပေမယ့် စစ်တပ်လုံးဝမရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ်။
M-Media ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် စစ်တပ်မရှိတဲ့ နိုင်ငံ ၂၂ နိုင်ငံအကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဥရောပက ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်ပြီး စစ်တပ် လုံးဝ မရှိပါဘူး။ အန်ဒိုရာမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ လွှတ်တောင်ဆိုင်ရာ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့သာ ရှိပါတယ်။
ဒါဆိုရင် စစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် တိုင်းတစ်ပါးက ခြိမ်းခြောက်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ကြမလဲ?
ဒီအတွက် နယ်မြေချင်း ထိစပ်နေတဲ့ စပိန်၊ ပြင်သစ်တို့နဲ့ အန်ဒိုရာက သီးခြား စစ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေ ရရှိထားပြီး အဲဒီနိုင်ငံတွေက အရေးအကြောင်းရှိလာရင် အန်ဒိုရာကို ကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အန်ဒိုရာမှာ စစ်တပ်လုံးဝမရှိတာမဟုတ်ဘဲ အခမ်းအနားတွေမှာ စစ်ရေးပြဖို့အတွက်တော့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စစ်တပ်အငယ်စားလေးတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက စစ်တပ်ကို လုံးဝမထားတော့တဲ့ လက်တင်အမေရိက နိုင်ငံတစ်ခုပါ။
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကော်စတာရီကာဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်တွင်းစစ်အပြီးမှာ စစ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်တပ်မရှိတဲ့ အကြီးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်း လုံခြုံရေးကိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပါတယ်။
အိမ်နီးချင်း နီဂါရာကွာနဲ့ နယ်စပ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ကော်စတာရီကာအနေနဲ့ စစ်တပ်မထားဘူးဆိုတာကတော့ တော်တော်လေး အံ့သြဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
ကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းဖို့ ကြိုးစားတာကြောင့် ၁၉၈၁ ခုနှစ်ကတည်းက စစ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးကိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့က တာဝန်ယူထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံတော်တော်များများ ပါဝင်တဲ့ ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးစနစ် တစ်ခုရှိပြီး အဲဒီအထဲမှာ ဒိုမီနီကာ နိုင်ငံကလည်း အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်နေပါတယ်။
ကာရစ်ဘီယံဒေသက ကျွန်းပေါင်း ၇ ကျွန်းလောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံသေးသေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်က ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၈၃ ခုနှစ်ကတည်းက စစ်တပ်မရှိတော့တာပါ။ ပြည်တွင်လုံခြုံရေးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က တာဝန်ယူပြီး ဂရီနာဒါဟာ ကာရစ်ဘီယံဒေသ လုံခြုံရေးစနစ်မှာ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမှုဒဏ်ကို မကြာခဏ ခံရတာကြောင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာတော့ ဟေတီက စစ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ မြောက်အမေရိက နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဟေတီမှာ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခနဲ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမှုဟာ နိုင်ငံသမိုင်းမှာ ၁၂ ကြိမ်လောက် ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာ စစ်တပ်မရှိပေမယ့် အတိုက်အခံတွေကတော့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့ တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
ဥရောပနိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်တဲ့ အိုက်စလန်မှာ ၁၈၆၉ ခုနှစ်ကတည်းက စစ်တပ်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိရင် တော်တော်များများက အံ့သြမှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ အိုက်စလန်ဟာ နေတိုးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်နဲ့လည်း ကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေ ရရှိထားပါတယ်။
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလယ်က ဂီလ်ဘာ့တ်ကျွန်းစုလို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်း ၃ ကျွန်းပေါင်းကာ တည်ထောင်ထားတဲ့ ကျွန်းစုနိုင်ငံငယ် လေးဖြစ်ပြီး ၁၉၇၈ ခုနှစ်ကတည်းက စစ်တပ်မရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကီရစ်ဘာတီရဲ့ ကာကွယ်ရေးအတွက် သြစတေးလျနဲ့ နယူးဇီလန်တို့က တာဝန်ယူပေးထားပါတယ်။
ဥရောပနိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လက်ချင်စတိန်းဟာ စားရိတ်မတတ်နိုင်တာကြောင့် စစ်တပ်ကို ၁၈၆၈ ခုနှစ်ကတည်းက ဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါ စစ်တပ်ဖွဲ့ဖို့ ခွင့်ပြုချက်တော့ ရှိပြီး၊ ဒီအခြေအနေမျိုး အခုအချိန်အထိ မဖြစ်သေးပါဘူး
မာရှယ်ကျွန်းစုကလည်း ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာလယ်က ကျွန်းနိုင်ငံလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ် တိုင်းပြည်တည်ထောင်စဉ် ကာလကတည်းက စစ်တပ်မရှိတာပါ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနဲ့ ပြည်တွင်း လုံခြုံရေး ၂ ခုစလုံးးကို ကိုင်တွယ်ပြီး၊ အမေရိကန်နဲ့ ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက်တွေ ရရှိထားပါတယ်။
အိန္ဒိသမုဒ္ဒရာထဲက ဒီကျွန်းနိုင်ငံလေးကို မော်ရေးရှက်စ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံလို့ ခေါ်ဆိုပြီး ၁၉၆၈ ခုနှစ်ကတည်းက စစ်တပ် မရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်အား ၁၀၀၀၀ လောက်ပါဝင်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတော့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး စစ်ရေး၊ ရဲဘက်ဆိုင်ရာနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ တာဝန်တွေကို ရယူထားပါတယ်။
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ခြမ်းက ကျွန်းထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မိုခရိုနီးရှားမှာ စစ်တပ်လုံးဝမရှိဘဲ နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးတွေကို အမေရိကန်က တာဝန်ယူထားပါတယ်။
မိုနာကိုဟာ ပြင်သစ်ရဲ့ မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတမ်းက နိုင်ငံအသေးလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၇ ရာစုလောက်ကတည်းက စစ်တပ်မရှိတော့တာပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်အသေးစားလေး ၂ ခုတော့ရှိပြီး တစ်ခုက အိမ်ရှေ့မင်းသားကို ကာကွယ်ပေးရတာဖြစ်ကာ တစ်ခုကတော့ ပြည်သူကို ကာကွယ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြင်သစ်က တာဝန်ယူထားပါတယ်။
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလယ်က လူဦးရေ တစ်သောင်းကျော်သာရှိတဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးပါ။ စစ်တပ်မရှိဘဲ သြစတေးလျက ကာကွယ်ရေးအတွက် တာဝန်ယူထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုတော့ရှိပြီး ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူပါတယ်။ နာရူအူဟာ အကျယ်အ၀န်းအရရော လူဦးရေအရပါ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသေးဆုံး တိုင်းပြည်တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၉ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရကတည်းက စစ်တပ်မရှိတာပါ။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ဖက်ခြမ်းက ဒီနိုင်ငံလေးမှာ လူဦးရေကလည်း ၁၈၀၀၀ နီးပါးသာ ရှိပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုတော့ ထားရှိပြီး ရေကြောင်းစောင့်ကြည့်ရေးတွေ ပြုလုပ်ဖို့အတွက် လူ ၃၀ ပါတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုကိုလည်း ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ဒီနှစ်ဖွဲ့ပေါင်းကာ ပြည်ထွင်းလုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူပြီး ကာကွယ်ရေးကိုတော့ အမေရိကန်က တာဝန်ယူထားပါတယ်။
ပါနားမားဟာ မြောက်အမေရိကနဲ့ တောင်အမေရိက တိုက်ကြီးနှစ်ခုကို ဆက်ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းက စစ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ပနားမားပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့က ပြည်တွင်လုံခြုံရေးနဲ့ နယ်စပ်ပြဿနာတွေကို တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ပါတယ်။
ကာရစ်ဘီယံပင်လယ် အရှေ့ပိုင်းက နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ စိန့်လူစီယာမှာ စစ်တပ် လုံးဝမရှိဘဲ ကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူထားတဲ့ ဒေသတွင်လုံခြုံရေးနစ်ကပဲ စိန့်လူစီယာရဲ့ ကာကွယ်ရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ တော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ဖွဲ့တစ်ခုတော့ရှိပြီး ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးကို ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
၁၇။ စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရီနာဒီနက်စ်
စစ်တပ်မရှိတဲ့ နောက်ထပ် ကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံကျွန်းနိုင်ငံ တစ်ခုပါ။ လူဦးရေ ၁ သိန်းကျော်သာရှိတဲ့ သူလည်းပဲ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးစနစ်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲက ကျွန်းနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့ ဆာမိုအာဟာ နယူးဇီလန်လက်ထဲက လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းက စစ်တပ်မရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအတွက်တော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရှိနေပြီး ကာကွယ်ရေးအတွက် နယူးဇီလန်က တာန်ယူပေးထားရပါတယ်။
တောင်ပစိဖိတ်က ကျွန်း ရာပေါင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံလးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကနဦးက စစ်တပ်တစ်ခု ရှိပေမယ့် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် သြစတေးလျနဲ့ နယူးဇီလန်တို့က ၀င်ရောက်ဖြန်ဖြေပေးခဲ့ရပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ စ စ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားကတော့ တော်တော်လေး ကြီးမားပါတယ်။
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲက ဗြိတိန်အစောင့်ရှောက်ခံနိုင်ငံတစ်ခုပါ။ လူဦးရေ တစ်သောင်းစွန်းစွန်းပဲရှိတဲ့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြည်တွင်းလုခြုံရေးကို တာဝန်ယူထားပါတယ်။
လူဦးရေ ၂ သိန်းကျော်ရှိတဲ့ ဗနူအာတူဟာ ကျွန်းနိုင်ငံလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ရှိပါတယ်။ စစ်တပ်မရှိပေမယ့် ဗနူအာတူ ရဲတပ်ဖွဲ့တော့ရှိပြီး လက်နက်အငယ်စားလေးတွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ခရစ်ယာန်ကက်သလစ်အသင်းတော်ရဲ့ အကြီးအကဲ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးပါပဲ။ ကမ္ဘာ့အသေးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီနိုင်ငံလေးမှာ ပြည်တွင်း လုံခြုံရေးအတွက် Gendarmerie Corps အဖွဲ့က တာဝန်ယူထားပြီး ဆွစ်ဇာလန် အစောင့်တပ်ဖွဲ့ကလည်း ကာကွယ်မှုတွေ ပေးပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်တော့ အီတလီက တာဝန်ယူထားပါတယ်။ အရင်က Palatine Guard နဲ့ Noble Guard လို့ခေါ်တဲ့ တပ်ဖွဲ့တစ်ချို့ ရှိခဲ့ပေမယ့် ၁၉၇၀ မှာ ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
Ref: wiki, Storypick.com
← စိတ်ကျရောဂါ အကြောင်း	“အကြမ်းဖက် ၀ါဒနှင့် အစ္စလာမ် လုံးဝ ဆန့် ကျင် ကြောင်း” မီးမောင်း ထိုးပြ သည့် စာအုပ် ထွက်ပြီ →
Popular Posts	လူနည်း စု၏ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှုထား၍ မရ ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် က ဆို	GTC ကျောင်းသား/သူနှစ်ဦး၏ဗီဒီယိုဖိုင်	ဓည၀တီဆိုဒ်သို့မှန်ကန်သော သတင်း၊ ဆောင်း ပါး၊ ဓါတ် ပုံ များ ပေး ပို့ လို ပါ က danyawadi9@gmail.com နဲ့ ဆက် သွယ် ပါ ။ . . . If you want to post any real documents such as , History,Articles , photos and News ,Contact here.	THIT HTOO LWIN Movies, Videos, VCD, Latest	ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးကိုစစ်ဗိုလ်ကြီးကအဓမ္မ ကျင့် ပါ တယ် ဆို တဲ့ ကိစ္စ အ တွက် ဆယ် တန်း ကျောင်း သူလေး ယွန်းသော် တာမြတ်နိုး ရဲ့ တောင်း ပန် စာ...	သံလျှင် GTC ကစုံတွဲ၏လုပ်ရပ်	Myanmar Love Stories eBooks	ရိုဟင်ဂျာအရေး လူသားထုအပေါ် ကျုးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂပြော	The History of ROHINGYA MUSLIMS of Arakan (Rakhine state) , Burma.	မြိတ်မှာအမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးမှုမှာ မု ဒိမ်း ကျင့် ခံ ရ ဟု ယူ ဆ Recent Posts	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်မစွက် ဖက် ရ ဟူ သည့် အာဆီယံ ပဋိညာဉ်ကို မလေးရှား အစိုးရ လိုက်နာရန် မြန်မာ အစိုးရပြော
မောင်တောအကြမ်းဖက်မှု အစိုးရ စုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲ
ရခိုင်မှာ အင်အားသုံးစွဲမှုကို အစွမ်းကုန် ထိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်ဖို့ ကုလကိုယ်စားလှယ် တိုက်တွန်း
“မောင်တော ကိစ္စ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေး သရွေ့ မည်သူ့ကိုမျှ စွပ်စွဲမည် မဟုတ် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော”
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေး စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ကုလ ပြောကြား
အာဏာပိုင်များက ဖိအားပေးသော်လည်း ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီးရှေ့တွင် “ရိုဟင်ဂျာ”စကားလုံး သုံးစွဲမည် ဟု ချားလ်မောင်ဘို ပြောဆို
အင်တာဗျူး(235)
Total guests visited လာဖတ်သည့် ဧည့်သည်ပေါင်း 3,913,522 ဦး
Visitors’ Countries Since 16-11-2012;လာဖတ်သူတို့ နိုင်ငံ	Click here to read the articles by date-posted ရက်စွဲ အလိုက် ဖတ်ရှုရန် August 2016